အာဆင်နယ်သတင်းတိုများ | Football Myanmar
November 18, 2018 Adam Willian	9 Comments
* အာဆင်နယ် အသင်း တောင်ပံ ကစားသမား အီဝိုဘီ ဟာ နိုင်ဂျီးရီးယား အသင်း နဲ့ တောင်အာဖရိက အသင်း တို့ရဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ပွဲချိန်ပြည့် ပါဝင် ကစားပြီး နိုင်ဂျီးရီးယား အသင်းကို ၂၀၁၉ အာဖရိက ဖလား ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်အောင် စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါ ပွဲ မှာ နိုင်ဂျီးရီးယား အသင်း နဲ့ တောင်အာဖရိက အသင်း တစ်ဂိုးစီ သရေ ကျသွားခဲ့ပါတယ် ။
* အာဆင်နယ် အသင်း ဟာ အက်သလက် တီကို မင်နဲရိုး ရဲ့ ညာနောက်ခံလူ အီမာဆင် ကို ဘယ်လာရင် ရဲ့ အရန် ကစားသမား အဖြစ် ထားဖို့ အတွက် ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်ဝင်စား နေပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ တုန်းက ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူ လက်ခ်ျစတိုင်နာ ဟာ ရာသီကုန်ရင် စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်လာရင် ရဲ့ အရန် အဖြစ် အီမာဆင် ကို ခေါ်ယူလိုနေတာပါ ။ အသက် ၁၉ နှစ် အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ အီမာဆင် ကို ချဲလ်ဆီး အသင်းကလည်း ခေါ်ယူချင် နေပါတယ် ။
* အာဆင်နယ် အသင်း လူငယ် တိုက်စစ်မှူး တိုင်ရီဂျွန်ဂျူးစ် ဟာ အင်္ဂလန် ယူ-၁၈ အသင်း အိုင်ယာလန် ယူ-၁၈ အသင်းကို ၃-၁ နဲ့ အနိုင် ရတဲ့ ပွဲမှာ အရန်ခုံကနေ ထလာပြီး နှစ်ဂိုး သွင်းပေး နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အာဆင်နယ် အသင်း ရဲ့ နောက်ထပ် လူငယ်တိုက်စစ်မှူး တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဘာလိုဂန် ကလည်း နာကျင် အချိန်ပိုမှာ အနိုင် ပြတ်သားစေမယ့် တတိယဂိုး ကို သွင်းယူ ပေးခဲ့ပါတယ် ။
* အာဆင်နယ် အသင်းဟာ လစ်သူ ယေးနီးယား လူငယ် တိုက်စစ်မှူး ဗီလီယက်စ် ပီလူကိုင်တစ်စ် ( Vilius Piliukaitis ) ကို ခေါ်ယူဖို့ စောင့်ကြည့် နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ဘလက်ဘန်း အသင်းမှာ အငှားလာရောက် ကစားနေတဲ့ အသက် ၁၇ နှစ် အရွယ် တိုက်စစ်မှူးလေးကို အနာဂတ် မှာ တောက်ပလာမယ့် ကြယ်ပွင့် ကစားသမား အဖြစ် သတ်မှတ် ထားကြပါတယ် ။
* အာဆင်နယ် အသင်း ရဲ့ လူငယ် ကစားသမား နှစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ စမစ်ရို နဲ့ ဆာကာ တို့ နှစ်ဦးဟာ အင်္ဂလန် ယူ-၁၉ အသင်း အိုင်စလန် ယူ-၁၉ အသင်းကို ၃ ဂိုး ၁ ဂိုး နဲ့ အနိုင် ရ တဲ့ ပွဲ မှာ ပါ ဝင် က စား ခွင့် ရ ခဲ့ ပါ တယ် ။
* အာဆင်နယ် အသင်း ကစားသမားဟောင် ချိန်ဘာလိန်က အာဆင်နယ် အသင်း ပရိသတ် တွေဟာ သူ ဒဏ်ရာ ရနေတဲ့ အချိန်မှာ ယုံကြည်မှု မပေးဘဲ ဖိအား တွေပဲ ပေးခဲ့ကြောင်း ဖွင့် ဟ ပြော ကြား သွား ခဲ့ ပါ တယ် ။
* အာဆင်နယ် အသင်း ကွင်းလယ်လူ ရှာကာ က နည်းပြ အမ်မရီ လက်အောက်မှာ ကစားရတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ” ကျွန်တော့် အတွက် အကောင်းဆုံး ရာသီ လို့ ဆိုရမှာပါ ။ သံသယ ဖြစ်စရာမရှိ အောင် ကျွန်တော် နောက်တစ်ဆင့် ကို လျှောက်လှမ်း နိုင်နေပါပြီ ။ အာဆင်နယ် အသင်းကို စရောက်ကတည်းကထက် အခု အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာတယ်လို့ ခံစားရပါတယ် ။ နည်းပြ အမ်မရီ ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုလည်း အရမ်းကြီးပါတယ် ။ ” လို့ ဆိုပါတယ် ။
* ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက် နေ့မှာအာဆင်နယ် အသင်း ဟာ မြို့ ခံ ပြိုင်ဘက် စပါး အသင်းကို မူစတာဖီ ၊ ဆန်းချက်ဇ် တို့ရဲ့ သွင်းဂိုး တွေနဲ့ နှစ်ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင် ရခဲ့ပါတယ် ။
* အာဆင်နယ် အသင်း ဟာ နောက်ခံလူ ဟိုးလ်ဒင်း နဲ့ တွဲကစားဖို့ အတွက် အက်စ်ပန်ညို နောက်ခံလူ ဟာမိုဆို ကို ခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ် ထားနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။ အသက် ၂၃ နှစ် အရွယ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ဟာမိုဆို ကို ခေါ်ယူဖို့ ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် အသင်းကလည်း စိတ်ဝင် စားနေပါတယ် ။
Previous Postဇန်နဝါရီ မှာ ယူနိုက်တက် အသင်းကနေ ထွက်ခွာပြီး ထိပ်တန်း တိုက်စစ် အတွဲအဖက် ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖွယ် ရှိနေတဲ့ ဆန်းချက်ဇ်Next Post3 ပတ်ကျော် အနားယူရတော့မယ့် ရာကီတစ် နဲ့ နံနက်ခင်း သတင်းတိုများ
9 thoughts on “အာဆင်နယ်သတင်းတိုများ”
Mengagumi dedikasi yang anda masukan kke dalwm website webbsite anda & berita mendalam
yg anda tawarkan. It’s awesome untuk datang di sebuah wweb setiap sekali-sekali yang tak sama keluar dari tanggal
rehashed materi. Baca bagus saya sudah menandai website kamu & meneruskan RSS feed ke akun Google
Every weekend i used to payaquick visit this website, because i wish for enjoyment, for the reason that this this web site conations actually good funny information too.
We areagroup of volunteers and openinganew scheme in our community. Your web site provided us with helpful information to work on. You have done an impressive task and our whole community can be grateful to you.
There are many reasons that this kind of relationship get established on the Internet. King Louis XIX ruled France for 15 minutes. In their life dictionary, words like quitting never exist and they do everything to make life better as soon as the attackers had gone I stepped out of the doorway and dialled 000 (Australia’s emergency quantity) whereas following in the path they had taken.